ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » စကားလုံးမရှိဘဲသင်၏မေတ္တာသည် Express
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 22 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ဟုလျှောက်သောအခါအလွန်အမင်းအကောင်းဆုံးကပြောသည်, “စကားသည်သင်ကအစစ်အမှန်ပါစေခြင်းငှါပြုစရာအားလုံးထက်ပိုပြီး. ထိုအခါသင်သည်ငါ့ကိုချစ်ကြောင်းပြောရန်မလို. ငါသည်အထားပြီးသိင့် Cos ။” ကို '80 ရဲ့ကနေသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်အတွက်, စကားလုံးတွေထက်ပိုပြီး. ထိုသည်ကိုငါတို့ရှိသမျှအဘို့အမြော်လင့်သောအဆုံးစွန်၏ကြင်နာတတ်၏. ကိရိယာတခုအဖြစ်စကားများ အသုံးပြု. လိုအပ်မထားတဲ့သင်မည်သို့ခံစားရသူတစ်ဦးကိုပြသဖို့အများကြီးလမ်းရှိပါတယ်. ဒီနေရာတွင်ခံစားရတယ်အတိအကျဘယ်လောက်အထူးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြောပြမှငါးခုကိုနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်:
အိုကေ, သီချင်းစာသားစကားလုံးများမှာဒါပေမယ့်ပြောပြီနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမရှိသောကြောင့်ဒါနည်းပညာပိုင်းကအနည်းငယ်လိမ်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်မည်. ဘရိုင်ယန်အဒမ်အပါအဝင်မှရွေးချယ်ဖို့အများကြီးအဆင်းလှသောအစ်မသီချင်းတွေကိုရှိပါတယ်’ ကောင်းကင်ဘုံသည်, ခြေကျော်အချိန်နှင့် Alanis Morissette ရဲ့ဌာနမှူးပြီးနောက် Cyndi Lauper ရဲ့ Time ကိုသင်ပေးပို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေါ် မူတည်.. ့မှတ်တမ်းပေါ်တွင်ကပ်ဒါမှမဟုတ်သင်တစ်ဦးအဆိုတော်သို့မဟုတ် / နှင့်ဂီတပညာရှင်ဆိုရင်ဘာကြောင့်သင့်ရဲ့ချစ်သူတစ်ယောက် serenading မှာကသွားလာရင်းမပေး? ဒါဟာပိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေး touch နဲ့ထပ်ဖြည့်.
ပန်းပွင့် & လက်ဆောင်များ
ပန်းပွင့်အမှန်တကယ်မဆိုပဲသင်၏မေတ္တာကိုဖော်ပြတဲ့အကြီးအလမ်းရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မေတ္တာကိုရဲ့အကြိုက်ဆုံးပန်းပွင့်ကိုသိသေချာထိုမြို့မှသွား. သူတို့အမွှေးနံ့သာ / aftershave ကဲ့သို့ရိုးရာပန်းပွင့်သို့မရှိကြသည်ကိုတွေ့လျှင်သို့မဟုတ်တစ်နည်းအားသူတို့ကြိုက်အရာတစ်ခုခုအတွက်သွား, မိတ်ကပ်, စာအုပ်တွေ, ဒီဗွီဒီများ, စသည်တို့ကို … သင်သည်ထိုသူတို့စကားကိုနားမထောင်နှင့်သင်တို့သူတို့ကြိုက်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကိုပင်မှတ်မိကြောင့်သင်သည်ထိုသူတို့ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာသိသောဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့သင့်မေတ္တာကိုပြသ. သူတို့ဘာမှမပြောကြဘူးလျှင်တောင်မှလူတွေကဤအရာတို့ကိုသတိထားမိမှာ.
သူတို့ကို Remote Control ကိုထိန်းချုပ် Allow
ဝေးလံခေါင်ဖျားထိန်းချုပ်မှုသင်၏မေတ္တာထိန်းချုပ်မှုခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းအစားရှိသမျှတို့သည်အချိန်နှင့်အမျှယူသင်သည်သူတို့ကိုမချစ်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အမွှေးအများနှင့်သိမ်မွေ့သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. နောက်ဆုံးတော့, မေတ္တာဖြစ်ပါတယ်သင်အကြိုက်ဆုံးပြပွဲဖွင့်ပေးစေခြင်းငှါ, ကမ?!
အတတ်ပညာ & ဓာတ်ပုံများ
သင်ဖန်တီးမှုရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့မေတ္တာကိုတစ်ဦးချစ်ကြည်နူးရုပ်ပုံဖန်တီးတကယ့်ရင်ခုန်စရာစိတ်ကူးရှိနိုင်ပါသည်. သို့မဟုတ်အခြားကောင်းတဲ့အိုင်ဒီယာသင့်အသက်တာ၏မေတ္တာကိုတင်ဆက်ဖို့ frame နှစ်ခုလုံးကိုသင်၏တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်.
/ လက်ထပ်ခြင်းသူတို့နှင့်အတူရှိ Move
သူတို့ကိုကောင်းကောင်းမှကျူးလွန်ထက်တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်အသင်၏မေတ္တာဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်ထက်မပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းရှိသလားင်! ဒါကြောင့်သင်ဟာအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီနှင့်သင်သူတို့သည်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်လျှင်, သင့်အဘို့အဘယ်သို့သောစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်?!